Archive de l'auteur | NewsMada | Page 2
Par Taratra sur 03/12/2021 NS Malagasy, NS-Culture
Soul pop RnB- Trano Bongo Tanjombato Zoma mahafinaritra… Hanafana lanonana, faran’ny herinandro, ao amin’ny No Doze Trano Bongo Tanjombato, anio zoma 3 desambra 2021 manomboka amin’ny 9 ora alina, ry Fabre, Mialy, Kôvou, Fifaliana. Mpanakanto efa tsy zovina amin’ny maro intsony ny hiray sehatra hamelona ireo hira tany amin’ny taona 90 sy ny hafa. Old […]
Rahajasoa Honoré Mpikabary: « Marobe ireo manorin-tokantrano rehefa faran’ny taona »
Ity izany vao tonga amin’ilay fitenenana hoe, “hanambady amin’ny faran’ny taona”. Rariny tokoa izay satria azo tarafina fa vaovao ny taona, vaovao ny zava-drehetra, mijoro fa lehilahy. “Tena marobe ny olona manorin-tokantrano amin’izao, indrindra rehefa faran’ny taona tahaka izao. Ho ahy manokana, feno dia feno ny fandaharam-potoana amin’ity volana desambra ity”, hoy Rahajasoa Honoré, filoha […]
Boky – Ravorombato: hivoaka ny « Rangotra voatsonga »
Masaka ny nahandro ! Ny zoma 17 desambra izao, manomboka amin’ny 2 ora sy sasany, ao amin’ny efitrano Dox (Tranombokim-pirenena Anosy). Fotoana hamoahan-Ravorombato Ony Lantoarimamy ilay boky « Rangotra voatsonga ». Amin’ny alalan’ny seho an-tsehatra ahitana ny hira miaraka amin’Ifanihy sy antsa hotanterahin’ny Havatsa-Upem ary ny Kaompania Bee Z’Art, hilalao sombitantara nampitondraina ny lohateny « Hazakazaky ny fo ». Na […]
Na eo aza ny hasina ananany…: ataon’ny sasany tsinontsinona ny zavakanto malagasy
Manana ny maha izy azy, hono, ny zavakanto malagasy. Azo inoana fa ilay mampiavaka azy (zavakanto) io lazaina io. Ao ihany koa ireo tsy hananan’ny hafa. Na manaka-danitra aza ny hambompo hoenti-maneho izany, mbola misy hatrany ireo mahita « sary » hafa mihitsy ka mamoaka endrika manamaloka ny zavakanto malagasy. Na tsy mbola voafaritra mazava aza ny […]
Firongatry ny valanaretina: miisa 91 ireo nifindran’ny Covid-19 tao anatin’ny iray andro
Par Taratra sur 03/12/2021 Faits Divers, NS Malagasy
Misoko mangina. Nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian teny amin’ny CCI Ivato, omaly, nanoloana ny depiote fa miakatra ny tahan’ireo tratry ny Covid-19. Miisa 91 izany tao anatin’ny iray andro ka anisan’ny tena ahitana izany ny any Vakinankaratra, Matsiatra Ambony ary Analamanga, araka ny nambarany. Manoloana izany indrindra, noraisina ny fepetra amin’ny fifandraisana amin’ny atsy Afrika Atsimo, […]
Mampatsiahy ny CUA: tsy mahazo miriaria ankalamanjana ny biby fiompy
Par Taratra sur 03/12/2021 Divers, NS Malagasy
Nanao fampatsiahivana ny kaominina Antananarivo Renivohitra, omaly, fa tsy tokony havela hiriaria eny ankalamanja sy eny amin’ny lalam-bahoaka ny biby fiompy an-trano toy ny alika sy ny saka ary ny biby hafa fa fehezina amin’ny toerana voatokana ho azy ireny. Ho fitandroana ny fahasalamana sy ny filaminana ary indrindra ho fisorohana ny valanaretina no anton’ny […]
Fandraharahana sosialy – Poesam: nandresy ny tetikasan’ny fanabeazana AHIA
Ny tetikasan’ny tanora dimy mianadahy Andeha hianatra izahay ankizy (AHIA) no nandrombaka ny laharana voalohany tamin’ny fifaninanana Prix orange de l’entrepreneur social en Afrique et Moyen-Orient (Poesam) taona 2021. « Tetikasa ahafahan’ny rehetra mandrotsa-bola amin’ny alalan’ny internet ka entina hamatsiana ny fianaran’ny ankizy 20 mianadahy manomboka amin’ny kilasy 6ème ka hatramin’ny famaranana. Mpianatra avy amin’ny fianakaviana […]
Karate-Mada: fifaninanana hamaranana ny taona 2021
Par Taratra sur 03/12/2021 NS Malagasy, NS-Sports
Eo am-pamaranana ny taom-pikatrohana avokoa, amin’izao fotoana izao, ny taranjam-panatanjahantena tsirairay, isan’izany ny taranja karate. Ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, hotontosaina ny 11 sy 12 desambra izao ao amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny hamaranana izany, raha ny nambaran’ny avy eo anivon’ny federasiona malagasin’ny karate. Avy hatrany dia natao Open, izany hoe, ho an’ny sokajy rehetra […]
Kitra – «Orange Pro league 2022»: lalao 8 hanombohana ny fihaonana
Hanomboka ny asabotsy 4 sy ny alahady 5 desambra ho avy izao, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra «Orange pro league 2022». Fihaonana miisa 8 ny voalahatra amin’izany ka ny telo tanterahina ny asabotsy ary dimy kosa ho an’ny alahady. Raha ho an’ny andro voalohany, anisan’ny fihaonana goavana amin’izany ny fandraisan’ny Uscafoot […]
OMAPI: 30 000 ny marika voasoratra hatramin’ny 1994
Ny Omapi (Office malgache de la propriété industrielle), dia misahana ny fizaka-manana ny fiarovana ny fikarohana. Ny Omda (Office malagasy du droit d’auteur) momba ny zavakanto ; ny Omapi kosa fiarovana ny famoronana eo amin’ny sehatry ny indostria sy ny varotra. Afaka mametraka fiarovana any amin’ny Omapi izay mihevitra fa nahavita famoronana. Misy karazany efatra […]
Fifanolanana ara-bola: notebahin’ireo depiote ny adin’ireo minisitra roa vavy
Tsy milamina. Nohitsin’ny depiote ny ady an-tranon’ireo minisitra roa vavy eo anivon’ny governemanta ny amin’ny hampitsaharan’izy ireo izany. “Miparitaka anaty facebook izany…”, hoy izy ireo teny amin’ny CCI Ivato, omaly. Niely tanaty tambajotra ny taratasin’ny minisitry ny Tontolo iainana nangataka ny hamoahana ny vola eo anivon’ny minisiteran’ny Tetibola, ahafahany miasa. Nitaky ny hampiatoana izany kosa […]
Mandroseza II: hikorontana ny famatsiana rano eto Iarivo
Mitohy ny fampandehanana ny toby famatsian- drano faharoa, ny Mandroseza II Bis hanatsarana ny tambajotra eto an-dRenivohitra. Hametrahana fitaovana vaovao, paompy, hapetraka amin’ny asabotsy 4 desambra ho avy izao eny an-toerana. Hisy fikorontanany, noho izany, ny famatsian-drano eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, manomboka amin’ny 8 ora maraina hatramin’ny 8 ora alina. Njaka A. Ireo […]
Fifanatrehana tamin’ny governemanta: nitakin’ny depiote vahaolana ny jiro, rano, vidim-piainana…
Nitanisa ny olana eo amin’ny famatsiana rano sy ny fahatapahan’ny herinaratra ny ankamaroan’ireo depiote. Anisan’izany ny any Antsiranana, araka ny fitarainan’ny depiote, Rahelihanta Jocelyne. Nampiaka-peo amin’ny fiakaran’ny vidim-piainana sy ny fahefa-mividy ary koa ny karama tsy miakatra ny depiote Todisoa Andriampandry. “Iandrasana fepetra avy aminareo izany. Tsy misy ny fanjakana tsara tantana izany eto… Tsy […]
Sandam-bola: nihena ho 4.500 Ar ny 1 euro
Par Taratra sur 03/12/2021 Economie, NS Malagasy
Nahazo aina kely ny vola ariary raha oharina amin’ny euro, nanomboka ny volana novambra teo. Nidina ho 4.530 Ar ny sandan’ny 1 euro, omaly, raha efa tafakatra manodidina ny 4.600 Ar ny faran’ny volana oktobra 2021. Misy tombony ho an’ny sandam-bola Ariary ny fihenan’ny sandany miohatra amin’ny vola vahiny, toy izao amin’ny euro izao, eo […]
Fiaraha-miasa: resy lahatra amin’ny vinan’ny filoha ny Alemà
Par Taratra sur 03/12/2021 NS Malagasy, NS-Politique
Noraisin’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry teny Iavoloha ny delegasiona avy any Alemaina. Voaresaka ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. Nitarika izany ny sekreteram-panjakana miadidy an’i Afrika eo anivon’ny minisiteran’ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana (BMZ), Stefan Oswald. Resy lahatra amin’ny vinan’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny vahiny ka nanamafy ny fahavononany hiara-dalana sy hanohana amin’ny fanatanterahana ny “Plan […]
Fandorana tranona jeneraly: niakatra fitsarana omaly ny raharaha
Naharitra ora maro ny fihainoana ireo voarohirohy tamin’ny fahamaizana ny tranona jeneraly iray efa misotro ronona tao Antaniavo-Antsiraba, ny volana septambra 2020. Hatramin’ny ora nanorantanay farany, mbola nitohy teny anivon’ny fitsarana ao Antsirabe raharaha. Tsiahivina fa nahatratra 15 ireo efa naiditra am-ponja vonjimaika noho ity doro trano ity. Tsiahivina fa naheno fipoahan-javatra mafy no nanaitra […]
Antalaha: raim-pianakaviana iray tsy hita popoka
Lehilahy iray antsoina hoe Andrianasolo Lovasoa Eric, 45 taona no tsy nandrenesam-baovao intsony nanomboka ny alarobia maraina teo. Mipetra-drery ao amin’ny fokontany iray ao Ambatofisaka ny lehilahy, izao tsy hita izao, hoy ny zandary ao an-toerana. Nambarany fa tsy fantatra mazava ny zava-misy fa ny trano vaky no tsikaritr’ilay naman’io raim-pianakaviana io afakomaly maraina. Voaraba […]
Fepetra isorohana ny valanaretina: manomana amin’ny hiatrehana ny Covid-19 ny Praiminisitra
Mety hiroso haka fepetra, tsy ho ela ? Notsiahivin’ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’nty teny fampidirany niatrika ireo depiote, omaly teny amin’ny CCI Ivato fa mbola miaina ao anatin’ny krizy ara-pahasalamana ateraky ny valanaretina covid-19 ohatry ny firenena rehetra maneran-tany i Madagasikara. Voatsiahy tamin’izany ny nidirana amin’ny hamehana ara-pahasalamana ny volana marsa teo. Noraisina ireo fepetra […]
Par Taratra sur 03/12/2021 La Une - Taratra, NS Malagasy
Saika hanafika ny mpianatry ny sekoly teknika eny Mahamasina ny mpianatry ny sekoly teknika eny Alarobia? Tsy inon-tsy inona no hoe antony sy fotony fa vokatry ny tsy fifankahazoan-dresaka amin’ny tambajotran-tserasera sosialy. Vaovao tsy marina na tsaho fotsiny izao, raha ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny sekoly roa tonta. Soa ihany, nivalona tanteraka eo ny raharaha? Arahaba […]
Par Taratra sur 03/12/2021 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Hamamoana niafara tamin’ny fahafatesana. Maty tsy tra-drano rehefa nahavoapotitra tsy nahy ny basy teny aminy ny miaramila kaporaly iray saika haneho fomba fampiasana basy tao anatina tsenakely nisotrosotroany tao Anjozorobe. Tranga mampalahelo. Miaramila iray miasa ao amin’ny fokontany Beronono, distrikan’Anjozorobe no maty tsy tra-drano afakomaly. Araka ny fanadihadian’ny zandarimariam-pirenena, nisotro toaka tao amina tsenakely iray […]
Ifotaka: nidoboka am-ponja ao Tolagnaro ilay miaramila nitifitra tovovavy
Naiditra am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjaben’i Tolagnaro ilay miaramila nitifitra tovovavy mpianatra tao Ifotaka. Niatrika ireo mpitsara mpanao famotorana nanomboka talata teo ny raharaha rehefa avy nandalo fanadihadiana lalina. Tsiahivina fa maty voatifitr’io miaramila io ny tovovavy 18 taona mpianatry ny CEG ao an-toerana ny herinandro lasa teo rehefa tsy nanaiky nadalainy. Manoloana ny tranga, […]
Fanompoam-pirenena…: nisitraka fankasitrahana ireo miaramila 59
Nankasitraka manokana ireo miaramila 59 tamin’ny fanompoam-pirenena nataon’izy ireo ny kaomandin’ny Bana (Base Navale d’Antsiranana) na tobim-pamaharana ao Antsiranana, CVA Sam Hieng Twion Kalobe Michael, ny 30 novambra lasa teo. Tao amin’ny toby nandritra ny roa taona, afa-po tamin’ny fitiavan-tanindrazana tamin’ny alalan’ny fanompoana nataon’ireto miaramila 59 antokon-taona 2019 faharoa ireto ny kaomandin’ny Bana. Araka izany, […]
Nofatoran’ny fokonolona …: tratra tao anaty tranon-kisoa ilay tovolahy
Saron’ny olona tao anaty tranon-kisoa tetsy Ambohitrimanjaka, omaly maraina, nofatoran’izy ireo tamin’ny tady teo amin’ny lalana hiditra ny tanàna ny tovolahy iray. Voatondro ho nangalatra kisoa, nofaizin’ireo olona nahatratra azy ilay tovolahy. Tsy voamarina mazava anefa raha tena nikasa hangalatra kisoa tokoa ity farany. Voatondro ho tsy salama saina, tsy fantatra mazava izay nataony tao […]
Parvis Analakely: ampirantiana ireo sampandraharahan’ny polisim-pirenena
Misokatra ho an’ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny hetsika fankalazana ny faha-60 taona ny polisim-pirenena izay tanterahina amin’ny alalan’ny fampirantiana ireo sampandraharaha eo anivon’ny polisim-pirenena. Mandritra ny roa andro ny hetsika eny amin’ny Parvis Analakely. Tonga nanome voninahitra sy nanotrona ny lanonana fankalazana ny faha-60 taonan’ny polisim-pirenena ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, Andriantsitohaina Naina niaraka tamin’ny mpikambana […]
« Précédent 1 2 3 4 … 1 782 Suivant »